Ukubaluleka kweCapricorn Earth Element - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi Iimpawu Nophawu Lomntu
Ukubaluleka kweCapricorn Earth Element
Capricornyiikhadinaliuphawu lomhlaba, okuthetha ukuba unamandla amakhulu okuqala adityaniswa nokuzinzisa kunye nefuthe lomhlabaisiqalelo somhlaba. Olu dibaniso lokuba luphawu lwekhadinali olusebenzayo kunye nophawu lomhlaba olusisiseko olunika uCapricorn uninzi lweempawu zakhe.
Indlela uMhlaba oChaphazela ngayo iCapricorn
Ngenxa yokuba balawulwa yinto yomhlaba, iiCapricorns zibonisa izinto ezininzi zomhlaba, ezomeleleyo nezizinzileyo.
I-4 Cardinal Zodiac Signs: Amandla kunye nentsingiselo kwi-Astrology
Inyanga kwiiMpawu zeCapricorn ziQinisekisiwe kwaye zinobutyebi
Xa ufuna umntu oza kuthatha iprojekthi ekumgangatho ophezulu kwaye uyibone de kube sekupheleni, iCapricorn yigal yakho. Ukuzimisela kwakhe luphawu olunamandla lomhlaba olumenza umphathi weprojekthi othembekileyo kunye / okanye umqalisi, kodwa ngokungafaniyo nabanye abathanda ukusebenza kwiiprojekthi, iCapricorn ijolise ngokukodwa kwaye ayizukuyeka de iprojekthi igqitywe ukoneliseka. Nangona kunjalo, inkqubela phambili, ngelixa izinzile, inokuthi icothe ngenxa yamandla omhlaba, athanda ukuba amandla ahamba kancinci anokuba buthathaka ngaphandle kokulinganisela kwezinye izinto.
Ukudibanisa amandla okuqala eempawu ezibalaseleyo kunye nokuzimisela kweempawu zomhlaba kwenza iCapricorn ibhongo. I-Capricorn zezona ziphumeleleyo kwi-zodiac, kodwa zinzima kakhulu kubo, kwaye nayiphi na impumelelo iyancitshiswa ngenxa yamabhongo amatsha kunye namatsha. Oku kuthetha ukuba iCapricorn, nangona isisiseko, ifikelela kwinqanaba eliphezulu kumabhongo obuqu kunye nawobungcali ukuze ihlangabezane neemfuno zayo zokufezekisa.
Sisiphumo ngqo samandla omhlaba eCapricorn athanda ukuba alumke kakhulu kwaye azibambe. Isixhobo somhlaba sinamandla amakhulu omxhuzulane kwiCapricorn. Ngelixa oku kukhokelela ekubeni iCapricorn isekwe phantsi kwaye igxile, ngaphandle kwezinye izinto ezilinganisa amandla omhlaba, inokubangela ukuba kubekho ukulumkisa okungaphezulu. Kwangokunjalo, iCapricorn inokuthi ilawuleke ngokuzimeleyo ukuze ihlangane nobungqongqo ngamanye amaxesha, kwaye kunokuba nzima ukusuka kwindlela yakhe ayikhethileyo, nokuba kusengqiqweni ukwenza njalo.
Amandla omhlaba aseCapricorn nawo aguqulela kuqeqesho olukhulu, into enokubonakala ingamandla endalo kwiimpawu eziguquguqukayo ngakumbi. Kwaye uqeqesho luphawu olugqwesileyo lweCapricorn ngeendlela ezininzi. Nangona kunjalo, xa kungalingani, uqeqesho lukaCapricorn lomhlaba lunokuxhomekeka ekuqineni ekukhetheni, kwiingcinga nakwizenzo.
Ngenxa yokuba isiqwenga somhlaba singumfazi kwaye samkela, uCapricorn uyakuthanda ukufumana kunye namava okufaka. Ungomnye weempawu zenyama zodiac, kwaye uyonwabela iziyolo ezahlukeneyo zenyama ezisusela ekuthandeni iwayini emnandi kunye nokutya okumnandi, ukuya kubunewunewu obutofotofo, ukuya kolunye uvuyo lomhlaba. Ukulinganisela, obu bumnandi buvumela uCapricorn ukuba onwabele kulwazi lweemvakalelo, kodwa ukungalungelelani kunokuphelela kwi-hedonism. Nangona kunjalo, uqeqesho oludumileyo lukaCapricorn luhlala lugcina iCapricorn ekuhambeni ngokupheleleyo kwi-hedonist.
Ingqeqesho eyaziwayo kunye nokuzimisela kukaCapricorn nako kumenza abe liqabane elizinikeleyo. UCapricorn akoyiki kulwalamano olwenziweyo. Endaweni yoko, luhlobo lomntu okhetha ngononophelo ukuba ngubani amthandayo kwaye emva koko enze yonke imizamo yokuhlala ezibophelela kulwalamano, nokuba kukuthandana, ubuhlobo, okanye ubuhlakani beshishini. Oku kwenza uCapricorn abe liqabane elithandanayo, kunye nokubanjwa njengeqabane elinokubakho okanye umhlobo osenyongweni.
Imali kunye nempahla ziziyolo zasemhlabeni, kwaye umhlaba womhlaba weCapricorn umnceda ukuba abenazo ezi zinto. Oku kuyinyani ngakumbi kwiCapricorn ngenxa yokudityaniswa kwento yomhlaba kunye nekhadinali yendalo kaCapricorn. Uziqalela ngokwakhe, unamabhongo, uqeqeshwe, kwaye uyazilawula. Zonke ezi zinto zidityaniswa ngendlela yokuba imali kunye nezinto eziphathekayo zifike ngokulula kwiCapricorn. Kwaye ngenxa yokuzeyisa kwakhe kunye nokuziphatha, ukwangumsindisi ongenakulindeleka ukuba abe yinkcitho nangona ethanda iziyolo zasemhlabeni.
UCapricorn akayedwa kwinkani yakhe. Luphawu ekwabelwana ngalo nguITauruskwayeIntombazana, eminye imiqondiso emibini yomhlaba. La mandla ashukumayo acothayo kunye namandla omxhuzulane angenza ukuba iCapricorn ibonakale ingenakuthinteka ngamanye amaxesha, ngakumbi xa into yomhlaba ingalinganiyo kwitshathi yendalo kunye nezinye, izinto ezikhaphukhaphu ezifana nomoya okanye umlilo.
Eyona midlalo ilungileyo yeCapricorn's Earth Element
Umqondiso womhlabaICapricorn iyahambelana kakhulungeiimpawu zamanzikunye neminye imiqondiso yomhlaba kunye nokuncinci okuhambelana nayoiimpawu zomoya. Uphawu lwamanziIScorpioIngangumdlalo obalaseleyo weCapricorn njengoko amanzi eScorpio ebonelela ngokulinganayo emhlabeni weCapricorn ngelixa esabelana ngeempawu ezifanayo kunye nezincedisayo. ICapricorn inokudibana kakuhle nayoiimpawu zomlilokuxhomekeke kwinto enye ekwitshathi yendalo nganye, enophawu lomliloIiAriesngakumbi ukunceda ukubasa umlilo phantsi kweCapricorn kwaye umncede ashiye ezinye zeembono zakhe eziqinileyo.
Ukuzisa ibhalansi kwiiCapricorn's Earth Elements
Ewe kunjalo, akukho mntu ubonakalisa iimpawu ezisekwe kuphela kwimpembelelo yomqondiso welanga. Iziphumo zezinye izinto zetshathi zihlala zizisa ibhalansi kwiimpawu zamandla zomhlaba. Nangona kunjalo, ukuba uCapricorn unamandla amaninzi kuyeitshathi yokuzalwa, angakulinganisa ngokuhlakulela ezinye izinto, ngakumbi umlilo nomoya.
Yitya ukutya okunezipayisi ukuvumela into yomlilo ukuba izise ukulingana emhlabeni weCapricorn.
Zibandakanye kubugcisa bemfazwe okanye olunye uqheliselo olufuna uqeqesho ukuze ujonge into yomhlaba kunye nokugcina iCapricorn ekubeni ingabi ngqongqo okanye ibambeke.
Zibandakanye kwiinkqubo zentshukumo ezihlakulela ezinye izinto, ezinjeiyogaokanye qigong.
Yenza into yokomoya enjeukucamngcaukuhlakulela umoya ophezulu kunye ne-ether yokulinganisela.
Hlakulela ixesha lokuphumla kwaye uzibandakanye nezinto ezinokubonakala zingenanjongo kwiCapricorn, njengokufunda okanye ukuzihlaziya, ukuze uzise ulungelelwaniso lwezinto.
Zama ukufumana iindlela zokuphuma ngaphandle kwesiqhelo kwaye uzenze ngokukhawuleza.
Amandla oMhlaba weCapricorn aMandla aMandla
Ngenxa yempembelelo yamandla omhlaba kwisibonakaliso sakhe selanga, uCapricorn uzinzile, uthembekile, uyaphumelela kwaye uzibophelele. Ngaphandle kokulinganisela, ezi mpawu zintle zinokuthi zibenzima ngakumbi ukulawula iimpawu ezinje ngeenkani, ke kubalulekile ukuba iCapricorn ihlakulele ulungelelwaniso ukuze igcine impembelelo yomhlaba ikwindawo entle.
Inja Uhlangulo Noku Ukwamkelwa Inja Training Makeup Tips Ukuqonda Kwaye Ukuzalwanolawulo Herbal Unyango
ususa njani umhlwa kwimpahla
imibuzo yokubuza intombi yam
ingaba niza kuba ziicaphuli zam zontombi
uyisonga njani itawuli yedada
ulicoca njani inxeba lenja
ukutywina ukutyibilika komnyango weglasi